hataru/हटारु: 'कान्तिपुर'ले देखाएको सही बाटो
By Salokya, on April 25th, 2011
यो माइसंसार डटकमबाट साभार गरिएको हो। थाहा छ, यो पुरानो भयो। र, पनि यसले नेपाली पत्रकारिता र विश्वको पत्रकारितामा कुन कुन घटनामा कसरी संचारमाध्यम चुके? कसरी त्यसलाई सच्याए र आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न क्षमा मागे?
बसमा भेटिएको ९१ लाख रुपैयाँ र हिराको हार जसको हो उसैलाई फर्काएको भनी बहुप्रचारित घटना अन्ततः काल्पनिक भएको पुष्टि भएको छ। ‘समाचार अन्ततः काल्पनिक घटना र नक्कली पात्रमा आधारित रहेको पुष्टि भएको’ भन्दै ‘नियोजित परिस्थिति र नक्कली पात्रहरूका कारण भ्रमपूर्वक गलत समाचार र विचार सम्प्रेषण हुन गएकामा सम्पूर्ण पाठकसँग क्षमा’ मागेको सूचना आजको कान्तिपुरले पहिलो पेजमा छापेको छ। कान्तिपुरको यो क्षमायाचनासँगै देशभर चर्चाको विषय बनेको र राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशले समेत प्रशंसा गरेको घटना सत्य हो कि झुटो हो भनी रहँदै आएको शंका पूर्ण रुपमा निवारण भएको छ।
त्योसँगै ‘कान्तिपुर’ले गलत समाचार छापिएकोमा क्षमा मागेर नेपालको पत्रकारिता इतिहासमा एउटा प्रशंसनीय र अनुकरणीय काम थालेको छ। जसरी गलत समाचार छापिनु गैरजिम्मेवारी हो, त्यसैगरी गलत समाचार छापिएपछि त्यसबारे पाठकहरुलाई जानकारी दिनु र क्षमा माग्नु जिम्मेवारीबोध हो। यसले कान्तिपुरको गरिमा घटाएको छैन, मेरो नजरमा बरु बढाएको छ। पत्रकार पनि मान्छे हो र गल्ती मान्छेबाट नै हुन्छ। गल्ती स्वीकार गरी माफी माग्ने जुन स‌ंस्कृति कान्तिपुरले पत्रकारिता क्षेत्रमा सुरु गर्‍यो, त्यसपछाडिका सबै पात्रहरुलाई सलाम गर्नुपर्छ। किनभने यो घटनाले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै औँला ठड्याउने काम भएको थियो। नेपालमा मात्र हैन, विदेशमा पनि यस्ता कयौँ घटना भएका छन्। फरक यति थियो- उतातिर गल्ती भएपछि क्षमा मागिन्थ्यो, यता त्यस्तो हुन्न थियो। चाहे त्यो रस्सेन्द्र भट्टराईको समाचारमा होस् चाहे डा. भक्तमानको अपहरण कान्डको समाचारलाई लिएर होस्।
थप पढ्नुस्: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,924722,00.html#ixzz1KXFphrHx
माथिका केही त उदाहरण मात्र हुन्, जसले देखाउँछ पत्रकारितामा गल्ती हुन्छ। तर त्यो गल्तीलाई लुकाउन खोज्नु अर्को महागल्ती हुन्छ। गल्ती भएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्नु आगामी दिनमा गल्ती हुन नदिन गरिएको संकल्प हुन्छ। गम्भीर गल्ती गरेका मिडियाहरु गल्ती स्वीकार गरेपछि अघि बढेका छन्। गल्ती स्वीकार्दा मिडियाप्रतिको विश्वास घट्दैन, दीर्घकालीन रुपमा बढ्छ। दुर्भाग्यवश नेपाली मिडियाले यस्तो चलन पछ्याउन अप्ठेरो मान्छ। अनुजा बानियाँको मुद्दामा ‘कान्तिपुर’ले जसरी आन्तरिक रुपमा छानबिन गरी क्षमा माग्ने साहस देखायो, पत्रकारिताको विद्यार्थीका नाताले व्यक्तिगत रुपमा मैले यसलाई सही बाटोमा अघि बढ्ने राम्रो प्रयासका रुपमा लिएको छु। यसलाई अरु मिडियाले पनि पछ्याउनु पर्छ। ‘कान्तिपुर’लाई धन्यवाद !
गल्ती छापियो तर स्वीकारिएन
नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा गल्ती भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि नसच्याइएका कैयन् उदाहरण छन्। डा. भक्तमानको अपहरण केसमा त्यो घटना आपराधिक समूहले गराएको पुष्टि भइसक्दा पनि स्रोतलाई उदधृत गर्दै माओवादीले घटना गराएको दावी गर्ने पत्रिकाले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न आवश्यक ठानेन।
त्यसैगरी ८ वर्षअघि एउटा केही न केहीको हैसियत भएका रसेन्द्र भट्टराई नामका व्यक्तिलाई खर्बपतिको रुपमा ‘कान्तिपुर’ दैनिक, द काठमाडौँ पोस्ट र कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रस्तुत गरेको थियो। त्यो गलत भएको पुष्टि भइसक्दा पनि ती मिडियामा कहिल्यै पनि गल्ती स्वीकार्ने काम भएन।
भक्तमानको केस भर्खरैको भएकोले धेरैले थाहा पाएका छन्। रसेन्द्र भट्टराईको केस सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। हेरौँ रसेन्द्र भट्टराईको समाचार, जसलाई सच्याउन आवश्यक ठानिएन।
KATHMANDU, Oct 19, 2003 - Simply unbelievable!
Posted by Nabin Bibhas at 8:11 PM